UChicco Twala ushaya phansi ngonyawo ngefilimu kaBrenda | News24
UChicco Twala ushaya phansi ngonyawo ngefilimu kaBrenda
Johannesburg - USello “Chicco” Twala ushaya phansi ngonyawo, uthi ifilimu entsha ngempilo kaBrenda Fassie ngeke iqhubeke engavumanga yena.
Lo mbhali wamaculo nophinde abengumdidiyeli uthi amalungelo awo wonke amaculo kaBrenda angawakhe, wawabhala futhi adidiyelwa nguyena, futhi uzothatha izinyathelo zomthetho ngenhloso yokuvimbela ukukhishwa kwefilimu ngempilo kaBrenda.
“Ngaphandle nje kokuthi inkampani yami inamalungelo, akekho oseke wakhuluma nami. Ngizizwa ngidelelwa futhi ngibukelwa phansi, ikakhulukazi njengoba kuyimina owabhala cishe u-75% wamaculo akhe,” kusho uTwala obedinwe efa ngesikhathi ekhuluma neCity Press ngoLesihlanu.
“Ngaphandle komculo engawubhala mina ngaphinde ngawudidiyelela uBrenda, ayikho ifilimu. Le filimi ngeke ibebikho.”
OLUNYE UDABA: Umlingisi uphika amahlebezi okushiya
Ngeledlule, inkampani yase-UK iShowbizbee, ngokubambisana neyakuleli iLegaci Nova Entertainment, bamemezela ukuthi benza ifilimi ngempilo kaBrenda okulindeleke iphume ekupheleni konyaka.
Ifilimi kulindeleke iqoshelwe eGoli naseKapa.
UMaBrrr washona eneminyaka engu-39 ubudala eSunninghill Hospital mhlaka 9 Meyi 2004 ngemuva kokusebenzisa ngokweqile i-cocaine.
UThokozani Mthembu okunguyena owayebhekele amafa kaBrenda uthi uTwala unehaba uma ethi wakhiqiza waphinde wadidiyela cishe u-75% wezingoba zikaBrenda.
Uthi uBongani Fassie uyena onelungelo lokugunyaza ukukhiqizwa kwefilimi manje njengoba amafa asabiwa.